आफ्नो तलब का’टे;र टिकापुर अस्पताललाई अक्सिजन किनेर दिने पहिलो नेपाल प्रहरी सलाम छ! – Taja Khawar
आफ्नो तलब का’टे;र टिकापुर अस्पताललाई अक्सिजन किनेर दिने पहिलो नेपाल प्रहरी सलाम छ!
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ ०२, २०७८ समय: १८:५८:१९
June 16, 2021 11
धनगढी। ईलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरले महामारीको समयमा निकै प्रशंसनीय काम गरेको छ ईप्रका टीकापुरले कार्यालय मातहतका कार्यालय र अस्थायी ट्राफिक पोष्ट टीकापुरका प्रहरीले स्वस्फूर्त रुपमा रकम संकलन गरि ५२ हजार बराबरको करिब ४० थान अक्सिजन सिलिन्डर रिफिल गरेर टीकापुर अस्पताललाई उपलब्ध गराएको छ ।टीकापुर अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डरको च,रम अभा वलाई मध्यनजर गर्दै ईप्रका टीकापुरले यस्तो प’रिस्थिति लाई मध्यनजर गर्दै उक्त अक्सिजन सिलिन्डर ह’स्तान्तरण गरिएको हो ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
विभिन्न सरुवा रोगका कारण ६० लाखभन्दा बढी कुखुरा मरेका छन् । पछिल्ला समय कुखुरामा लागेको रानीखेतलगायतको सरुवा रोगबाट त्यतिको सङ्ख्यामा कुखुरा मरेको कुखुरा व्यवसायीले बताएका छन् । फाट्टफुट्ट बर्डफ्लु पनि देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कुखुरा व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टीका पोख्रेलका अनुसार नेपालमा अहिले झन्डै चार करोड कुखुरा व्यावसायिक रूपमा पालिएका छन् । तीमध्ये तीन करोड त मासुका लागि पालिएका बोइलर मात्रै हुन् ।
कुखुरा मर्नुको कारण र त्यसले पारेको क्षतिबारे अध्ययन गर्न नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चद्वारा गठित कार्यदलका सदस्य डा. विष्णुहरि पोख्रेलले मासुका लागि पालिएका बोइलर, अण्डाका लागि पालिएका लेयर्स र चल्ला उत्पादनका लागि पालिएका माउ कुखुरा प्यारेन्ट नै सामूहिक रूपमा मरिरहेको जनाउनुभयो ।
“पाँच/छ महिनादेखि नै कुखुरा धमाधम मरिरहेका र अहिलेसम्म ६० लाखभन्दा बढी पुगेको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ”, डा. पोख्रेलले भन्नुभयो, “कतिपय किसानको खोर नै रित्तिने गरी कुखुरा मर्नु चिन्ताको विषय हो ।”
चितवनको भरतपुरमा रहेकोे मोडेल पोल्ट्री फार्म प्रालिको खोरमा रहेका पाँच हजार चार सय लेयर्स कुखुरा सबै मरेपछि खोर नै रित्तो भए । कुखुरा केन्द्रीय पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भरतपुरमा तिनको परीक्षण गर्दा रानीखेत देखिएको फार्मका सञ्चालक तिलोचन कँडेलले जानकारी दिनुभयो । “अरूतिर पनि मर्ने क्रम घटेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
रानीखेतले कुखुरा मर्दै गर्दा बाँचेका कुखुराले पनि अण्डा उत्पादन घटाउने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टीका पोख्रेलका अनुसार एउटा बोइलरमा तीन सय, लेयर्समा पाँच सय र प्यारेन्टमा एक हजार पाँच सय रुपियाँ उत्पादन लागत पर्दछ । सामान्यतः मर्ने कुखुराको सङ्ख्या बोइलर बढी भएकाले मर्ने कुखुराको औसत खर्च चार सय रुपियाँ मान्ने हो भने पनि अहिले देशैभर फैलिएको रोगले दुई अर्ब ४० करोड रुपियाँ बराबरका कुखुरा मरेको पोख्रेलको तर्क छ ।
उहाँका अनुसार खोप लगाएका कुखुरा पनि मर्ने गरेका छन् । रानीखेतको खोप लगाएका कुखुरा पनि मरेको उहाँले बताउनुभयो । कुखुरामा दाना पानी कम खाने, हरियो दिसा गर्ने, मुन्टो बटार्ने, अण्डा कम दिनेजस्ता लक्षण देखिएपछि भटाभट कुखुरा मर्नु रानीखेतको लक्षण भएको बताइन्छ । यो रोग एक प्रकारको सरुवा रोग हो ।
Last Updated on: June 16th, 2021 at 6:58 pm
४५९ पटक हेरिएको